तपाईं एक कारखाना वा एक व्यापारिक कम्पनी हो?
हामी हाम्रो आफ्नै कारखानों मात्र छ तर पनि केही अन्य उद्यम मा साझेदारी छ।
तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्छन्?
हो, यदि नमूना स्टक उपलब्ध छ
तपाईं ढुवानी व्यवस्था गर्न सकिन्छ?
निश्चित, हामी स्थायी माल forwarder सबैभन्दा जहाज कम्पनी सबै भन्दा राम्रो मूल्य पाउन र व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्न सक्छन् जो छ।
यो सामान्यतया, आदेश मा आधारित छ 20 दिन - 15 दृष्टि मा जम्मा या एल / सी प्राप्त पछि।
तपाईं गुणस्तर नियन्त्रण छ?
हो, हामीले पाएको छ BV , एसजीएस प्रमाणीकरण।
आफ्नो भुक्तानी सर्तहरू के के हुन्?
100% अपरिवर्तनीय एल / सी नजर मा। वा टी / टी , 30% अग्रिम, र को प्रतिलिपि विरुद्ध ब्यालेन्स बी / एल 3-5 दिन भित्र।